Ala na-agba Manufacturers, Suppliers - China ala agba Factory
Single Ahịrị Tapered ala biarin
● Single n'ahịrị tapered ala biarin ndị separable biarin.
● Ọ nwere ike na-adị mfe ndokwasa na magazin na-ebu pedestal.
O nwere ike iguzogide ibu ọrụ axial n'otu ụzọ. Ma ọ nwere ike ịkwụsị njedebe axial nke osisi ahụ n'akụkụ oche na-ebu ya n'otu ụzọ.
Used A na-ejikarị ya eme ihe n'ụgbọala, na-egwupụta akụ, na nkà mmụta banyere ígwè, ígwè ígwè na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Row Ugboro abụọ ahihia tapered biarin ndị dị iche iche na-ewu
● Mgbe iburu radial ibu, ọ nwere ike ibu bidirectional axial ibu
A-Radial na axial ibu ibu na torque ibu, nke bụ tumadi ike ibu nnukwu radial ibu, na-bụ-eji na mmiri na-amachi axial mwepu na ma ntụziaka nke aro na ụlọ
● Kwesịrị ekwesị maka ngwa ndị nwere nnukwu ihe siri ike chọrọ. A na-ejikarị ya na oghere ụkwụ nke ụgbọ ala
Anọ ahịrị Tapered ala biarin
Ugboro anọ na-agba ọsọ agba agba agba agba nwere ọtụtụ ọkwa
Installation Mfe efere dị mfe n'ihi ihe pere mpe
● The ibu nkesa nke anọ na-rollers mma iji belata eyi na ogologo ọrụ ndụ
● N'ihi nbelata nkwụsịtụ nke mgbanaka dị n'ime, ọnọdụ axial na olu mpịakọta dị mfe
● The akụkụ bụ otu ihe ahụ dị ka ndị nke ot-ahiri anọ n'ahịrị tapered biarin na etiti yiri mgbaaka
● Otu ahihia nke nkedo na-ebu naanị site na ike radial, ezigbo nkwụsi ike, mmetụta na-eguzogide.
A-is Okwesiri maka mkpụmkpụ mkpụmkpụ nwere nkwado siri ike, oghere ndị nwere mwepụ axial kpatara site na elongation thermal, na akụrụngwa akụrụngwa nwere nfepu nke nwere ike iwepu maka ntinye na nkwụsị.
A-A na-ejikarị ya eme ihe maka nnukwu moto, igwe ihe eji eme ihe, njin ihu na azụ na-akwado ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ ala na-akwado ụgbọ okporo ígwè, mmanụ diesel crankshaft, ụgbọala traktọ ụgbọala, wdg.
Nwere oghere nke nwere oghere na oghere nwere oghere abụọ.
● Nwere uru nke kọmpat, nnukwu isiike, ikike buru ibu na obere nrụrụ mgbe eburu ibu.
Nwekwara ike ịhazigharị nnabata ahụ ntakịrị ma mee ka usoro nhazi ngwaọrụ dị mfe maka nrụnye na mkpofu dị mfe.
Anọ n'usoro cylindrical ala biarin nwere obere esemokwu na-adabara elu na-agba adiana.
A-● A na-ejikarị ya eme ihe na igwe nke igwe na-agagharị dị ka igwe igwe oyi, igwe na-ekpo ọkụ na igwe na-egbu mmanụ, wdg.
A-bearing Ihe nkedo a bụ nkewa dị iche iche, mgbanaka na-agbagharị ma na-agbagharị akụkụ ahụ nwere ike ịdị iche iche, ya mere, nhicha, nyocha, ntinye na disassembly nke agba dị ezigbo mma.
Ọ nwere mmetụta na-akpali akpali
Ọsọ dị ala
● I nwere ike inwe ngagharị
● Ngwa: akụrụngwa akụrụngwa ụgbọala na gwongworo ọkụ, trailers na bọs na wiil abụọ na atọ